Na inona na inona no sendra olana rehefa mampiasa dr.fone Toolkit, eto foana isika mba hanampy anao hiasa azy.
Mba hanampiana antsika hanampy anao eo amin'ny fomba haingana indrindra, azafady valio ireto fanontaniana 2-3, ka dia hitari-dalana anareo ho amin'ny ankavanana, ekipa fanompoana. (Technical Support, Customer Support na Sales)
I manana ara-teknika fanontaniana mikasika ny vokatra nividy aho.
Manana fanontaniana momba ny fisoratana anarana fehezan-dalàna, downloading, fametrahana na activating ny vokatra.
Tiako ho fantatra momba ny fahazoan-dàlana, sy ny refund fanavaozana politika.
Fotsiny aho hatao nanomboka ary manana fanontaniana.
Manana fanontaniana momba ny vokatra sasany asa sy ny fetra eo anoloan 'ny fividianana.
Izaho efa nanao hividy , fa manana fanontaniana momba ny filaminana .
Manana soso-kevitra ho an'ny mpitantana ny vokatra.
Te- hizara ny hevitra hafa mpanjifa.
Dia mba mifidiana ny mila manokana avy any ambany.
Ny fanontaniako dia hoe mikasika ny antontan-taratasy avy sitrana ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.
Manana fanontaniana ara-teknika mikasika ny vokatra I nividy.
Ny fanontaniako dia hoe mikasika ny recoverying antontan-taratasy avy amin'ny ny finday Android (Samsung, sns.)
Tsy misy ny ambony, dia mba mifidiana ny fandaharana ianao liana amin'ny
Masìna ianao, hamoaka ny fanontaniana ary hahazo valiny avy amin'ny manam-pahaizana ao amin'ny PDFelement Community.
Dia mba mifidiana ny sokajy iray izay mamaritra ny olana tsara indrindra.
Tiako ho fantatra ny fomba fiasan'ny ny fandaharana ny indray ny tahirin-kevitra alohan'ny hividy azy.
Ny rindrankajy dia afaka manamboatra iOS errros toy ny voalaza. Midika izany fa ny rafitra fandidiana dia namboatra koa (ohatra niraikitra tao fanarenana fomba na ny Apple famantarana manome fitoerana), ary hitondra ny fitaovana fandidiana ara-dalàna indray ny toerana. Izany dia azo atao tsy mahakasika ny angona. Izany dia endri-javatra izay ihany no miasa ao amin'ny dikan-karama ny rindrambaiko, ary tsy misy antoka fa ho asa.
Mahatahotra, olana voavaha! Mila fanampiana mivantana. hanomboka Over
Isika dia manome lanja ny hevitry ny mpanjifa, ary miarahaba anareo tonga soa amintsika momba ny zavatra niainanao amin'ny Wondershare Product. Alefaso anay ny hevitra, ny fangatahana, na fanehoan-kevitra. Marina fa tsy afaka mamaly mivantana ny fanamarihana, dia mampiasa azy io mba hanatsarana ny vokatra sy ny tolotra. Raha manao ara-teknika na manana fanohanana toe-javatra, dia andefaso olona antsika katsaram-panahy mampiasa ny Support Center, araka ny dia ho afaka mamaly amin'ny fanampiana
Soso-kevitra na fepetra takiana ho an'ny fandaharana endri-javatra
Ny fiderana momba ny vokatra
Tena ankasitrahantsika ny soso-kevitrao sy ny soso-kevitra ho an'ny vokatra. Ny hevitra dia ho alefa any ny ekipa fampandrosoana ny famerenana sy hahita raha mety hanampy ho amin'ny hoavy vaovao navoaka. Marina fa tsy afaka hamaly indray, dia fantaro fa isika dia manao izay vitantsika isika mba hahatonga ny vokatra tsara indrindra fa afaka, ary ny hevitra dia hanampy antsika be.
Raha manao mila fanampiana tamin'ny iray amin'ireo vokatra, antsoy ny fanohanantsika ekipa eo amin'ny Support Center.
Misaotra anao noho ny fotoana, ary manohana!
(Maximum Litera size: 60 MB)
Pay Method Paypal Carte de crédit
Operation System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 (32bit) Windows 7 (64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Lion) 10.7 (Lion) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Leopard) 10.4 (Tiger) 10.11 (Kapiteny) 10.12 (Sierra) Hafa
Product Version Windows (7.0.2) Windows (7.1.0) Windows (7.2.0) Windows (7.3.0) Mac (6.1.0) Mac (6.9.0) Mac (7.0.0) Hafa
Operation System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 (32bit) Windows 7 (64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.11 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Lion) 10.7 (Lion) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Leopard) 10.4 (Tiger) 10.11 (Kapiteny) 10.12 (Sierra) Hafa
Android Data Recovery Android SD Card Data Recovery Tsy nahomby Android efijery Data Recovery Android Lock Screen Removal
Andefaso mailaka aho izany vahaolana
Mbola mila fanampiana?
Omeo ny nangatahana vaovao sy dia hampifandray anareo amin'ny fanohanana iray amin'ireo mpiasa.